မြင်သူတိုင်း အသဲယားလောက်တဲ့ Ivy လေးရဲ့ ရိုက်ကွင်းမှာ ဆရာမကြီးလုပ်နေတဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေ – XB Media & News
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပေါက်တဲ့အိုး သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲကို ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး.. ပြန်ဆိုတေး သီချင်းများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်. ငယ်စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေချစ်ခဲ့ရတဲ့ အေသင်က ခုဆိုရင်ချစ်
စရာသမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သမီးလေးတို့မေမေ ဖြစ်လို့နေပါပြီ.. အေသင်ကို ချစ်လာကြတဲ့ ပရိသတ်များကလည်း အေသင့်သမီးလေး အိုင်ဗီလေးကိုလည်း ဆက်လက်ချစ်လို့နေပြန်ပါတယ်နော်… ခုလို ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနြေေ
ကာင့် ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း အဖြူအမဲသဲကွဲသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်. အချို့အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ မရပ်တည်ရဲဘဲ တိတ်ဆိတ်နေတာတွေကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းတွေကို ခံခဲ့ရသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲကမှ အေသင်ချိုဆွေကတော့ မိမိရဲ့ ခံယူချက်ကို ရဲရဲတင်းတင်း ရပ်တည်ခဲ့လို့လည်း အကြမ်းဖက်စကစ ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အေသင်က အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းခဲ့ပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝယူခဲ့ပါတယ်နော်။ အေ
သင့်မှာနောက်ထပ်ချစ်ရမဲ့ချစ်သူရရှိနေပြီဆိုတာလည်း ပရိသတ်ကြီးလည်း အသိဖြစ်မှာပါနော်… ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင့် အခုလက်ရှိ လက်တွဲဖော်ရဲ့ ချစ်ခင် ဂရုစိုက်ခြင်းတွေကို အပြည့်အဝရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။…ခုဆိုIvyလေးကအရမ်းလဲစကားတွေ
တတ်နေသလိုအရမ်းလဲချစ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ၊မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း၊ဝကစ်လေးမို့အရုပ်ေ လးလိုလှေ နတဲ့Ivyလေး ၊အဒေါ်ြ ဖစ်သူမေသင်ချိုဆွေရဲ့ FoodVlogတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်းအဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့Vlogလေးရိုက်ခဲ့တာပါ၊ Ivyလေးရဲ့FoodVlogလေးကမထင်ရလောက်ကြို
ကည့်ရှု့သူများခဲ့ပါတယ်…ဒီနေ့လေးမှာလည်း Ivy လေးက ရိုက်ကွင်းမှာ ရိုက်ထား တဲ့ပုံလေးတွေ ကို စိတ်တိုင်း ကျ ပြန်စစ်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်……
ပရိသတျကွီးရေ.. ပေါကျတဲ့အိုး သီခငျြးနဲ့ ပရိသတျတှကွေားထဲကို ရပေနျးစားလာခဲ့ပွီး တဈ ကိုယျတျောစီးရီး.. ပွ နျဆိုတေး သီခငျြးမြားနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို သိမျးပိုကျထားသူလေးဖွဈပါတယျ. ငယျစဉျကတညျးက ပရိသတျတှခေဈြခဲ့ရတဲ့ အသေငျက ခုဆိုရငျခဈြ
စရာသမီးလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သမီးလေးတို့မမေေ ဖွဈလို့နပေါပွီ.. အသေငျ ကို ခဈြလာကွတဲ့ ပ ရိသတျမြားကလညျး အသေငျ့သမီးလေး အိုငျဗီလေးကိုလညျး ဆကျလကျခဈြလို့နပွေနျပါတယျနျော… ခုလို ရှုတျထှေးနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနွေေ
ကာငျ့ ပရိသတျတှအေားပေးတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေလညျး အဖွူအမဲသဲကှဲသှားခဲ့ရပွနျပါတယျ. အခြို့အနုပညာရှငျတှကေလညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ မရပျတညျရဲဘဲ တိတျဆိတျနတောတှကွေောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ ဝဖေနျခွငျးတှကေို ခံခဲ့ရသူတှလေညျး ရှိကွပါတယျ။
အဲဒီအထဲကမှ အသေငျခြိုဆှကေတော့ မိမိရဲ့ ခံယူခကျြကို ရဲရဲတငျးတငျး ရပျတညျခဲ့လို့လညျး အကွမျးဖကျစကစ ရဲ့ဖမျးဆီးခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ အသေငျက အိမျထောငျရေးကံမကောငျးခဲ့ပမေယျ့ မိခငျတဈယောကျရဲ့ တာဝနျကို အပွညျ့အဝယူခဲ့ပါတယျနျော။ အေ
သငျ့မှာနောကျထပျခဈြရမဲ့ခဈြသူရရှိနပွေီဆိုတာလညျး ပရိသတျကွီးလညျး အသိ ဖွဈမှာပါနျော… ကုသိုလျကံ အကြိုးပေးကွောငျ့ အခုလကျရှိ လကျတှဲဖျောရဲ့ ခဈြခငျ ဂရုစိုကျခွငျးတှကေို အပွညျ့အဝရရှိနတော ဖွဈပါတယျနျော။…ခုဆိုIvyလေးကအရမျးလဲစကားတှေ
တတျနသေလိုအရမျးလဲခဈြဖို့ကောငျးနပေါပွီ၊မကျြလုံးဝိုငျးဝိုငျး၊ဝကဈလေးမို့အရုပျေ လးလိုလှေ နတဲ့Ivyလေး ၊အဒျေွါ ဖဈသူမသေငျခြိုဆှရေဲ့FoodVlogတှကေိုစိတျဝငျစားရငျးအဒျေါဖွဈသူနဲ့Vlogလေးရိုကျခဲ့တာပါ၊ Ivyလေးရဲ့FoodVlogလေးကမထငျရလောကျကွို
ကညျ့ရှု့သူမြားခဲ့ပါတယျ…ဒီနလေ့ေးမှာလညျး Ivy လေးက ရိုကျကှငျးမှာ ရိုကျထား တဲ့ပုံလေးတှေ ကို စိတျတိုငျး ကြ ပွနျစဈနတေဲ့ ခဈြစ ရာ ကောငျးတဲ့ ပုံလေးတှကေို တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော……
ပရိတ်သတ်တစ်ဦးမှ အဖြေရခက်တဲ့ေ မးခွန်း တစ်ခုမေးလာခဲ့တာကြောင့် ရယ်ရခက် ငိုရခက်ဖြစ်သွားတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်